Indlu yeFama ebuyiselweyo kwiChampagne Vineyards
iindwendwe zamva nje eziyi- 3 zithe lendawo ibibethumoya ndlela le ibicoceke ngayo.
Indlu yasefama ehlaziyiweyo yamatye yenkulungwane ye-19 enezitiya ezinomhlaba kunye nethafa, ezibekwe phakathi kwezidiliya ezinkulu zengingqi yeChampagne.
ILa Ravenne yindlu yefama yamatye yenkulungwane ye-19 ebekwe phakathi kwezidiliya ezinkulu zengingqi yeChampagne, yahlaziywa ngokupheleleyo ukuze kuphile ubomi obutofotofo, ngelixa igcina isimilo kunye nembonakalo yendawo yokuhlala yelizwe laseFransi.
Indlu enemigangatho emithathu inamagumbi okulala amahlanu kunye namagumbi okuhlambela amathathu anesiqingatha aneebhedi zeendwendwe ezilishumi elinanye.
Ngomgangatho owenziwe iithayile zangaphambili, iindonga zamatye eziveziweyo kunye nemiqadi yeenkuni, kunye neendawo ezininzi zomlilo ezisebenzayo, iLa Ravenne sisiseko sekhaya esifanelekileyo sokukhenketha izidiliya kunye namaphandle eChampagne kunye nokungcamla iiwayini zasekhaya. Lo myezo uhonjiswe kakuhle uquka igadi yeziqhamo, ingca ebanzi, imithi emikhulu, imigangatho emithathu, intendelezo ekhuselweyo kunye neshedi yokuqala.
Kumgangatho ophantsi, igumbi lokuhlala eliphangaleleyo lineebhedi ezitofotofo ezijikeleze indawo yomlilo enkulu, itafile yemidlalo emithandathu, kunye neengcango ezinkulu zamaFrentshi ezivuleleka kwithambeka nakwingca. Kwigumbi lokutyela, i-chandelier enamakhandlela ijinga phezu kwetafile yokutyela ukuze ihlale ishumi phambi kweziko lemveli.
Ikhitshi elinomgangatho wamatye lihlaziywe ngokupheleleyo kwaye lixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba izitya, i-microwave, kunye neetafile ezifakwe iithayile. Ivula kwigumbi losapho elinebha yokutyela, umabonwakude, iisofa ezitofotofo, kunye neengcango zaseFransi eziya kwipatio yentendelezo kunye ne-terrace. Kwakhona kulo mgangatho kukho iwasha yeempahla kunye nesomisi.
Phezulu kumgangatho ophakathi, igumbi lokulala elikhulu linebhedi elingana nenkosi phantsi kwesilingi ephezulu yeemitha ezintandathu enemiqadi eveziweyo. Indawo yomlilo, ibhalkhoni, kunye negumbi lokuhlambela elineshawari elineshawari yenza eli ibeligumbi lokulala elitofotofo.
Amanye amagumbi amathathu okulala akumgangatho ophakathi, asebenzisa igumbi lokuhlambela. Ezimbini zineebhedi ezilingana nokumkanikazi, enye ineebhedi ezingamawele amabini. Kumgangatho ongentla kumgangatho ongasentla kukho igumbi losapho elinebhedi elingana ne queen, ezitsala oomatrasi zabantwana, kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite.
ILa Ravenne inikezela ngembono yepanoramic ukusuka nganye kwiifestile zayo zezidiliya ezijikelezileyo zeChampagne, intlambo yaseSurmelin, kunye nelali entle ekufutshane yaseLe Breuil.
4.92 · Izimvo eziyi-40
Beka embindini weediliya zeChampagne, ubumfihlo bubonke, imizuzu engama-20 ukusuka e-Epernay naseChateau Thierry. Iilali zasekuhlaleni ze baguettes ezintsha kunye negrosari
I am a travel-enthusiast who has lived all around the world, collecting homes in quirky places on the way! I am family oriented and am married with two children. We live in California but try to travel as much as possible.
Umphathi wePropati uhlala kwilali ekufutshane. Umnini wonwabile ukuphendula imibuzo nge-imeyile.